Home / Pro G Gaming Stereo Headsets
ZAVA-MISY TOKONY TOKO: ZAVATRA MAFANA 40mm, mpamily môtô amin'ny endriny avo lenta, akora ara-pahamehana dia manatsara ny fahatsapan'ny tarika fitenim-paritra, mahatonga azy ho lafatra tsy amin'ny filalaovana lalao fotsiny ihany fa amin'ny fihainoana mozika na mijery horonan-tsary amin'ny findainao / solosaina.
MAMPIASA MIKROPHANA NOISE TSY MISY INDRINDRA: Omnidirectional boom mic dia manavao ny fonon-tànana ho loham-banona matihanina ho an'ny filalaovana, ny orinasa, ny podcasting ary ny fiantsoana mandeha. Aleo tsara ny feonao, mba hahafahanao miresaka tsara amin'ny hafa amin'ny birao / trano / fivoriana
DESIGNED FOR GAMING: mpamily 40mm mpamily manome feo stereo mahery, mamela anao hahita haingana ny fahavalonao mandritra ny lalao, ary mitarika ary mahatonga anao hahatsapa ho tena eo amin'ny sehatry ny lalao. Nofenoina tamina mic tokana tokana, mora kokoa ny ampiasaina
TOROHEVITRA REHETRA REHETRA: Ny fonon-tsofina malefaka sy tsy mihidy amin'ny lafiny roa dia miantoka fampiononana maharitra na dia amin'ny filalaovana lava aza. Ny kiraro stainless vy dia ahafahanao mahita ny mety sy manome kalitao
WIDELY COMPATIBLE: Ampidiro 6.35mm antonony, plug 3.5mm, ary adiresy splitter 3.5mm no tafiditra ao. Mifanaraka amin'ireo fitaovana rehetra dia manana amboakan-peo 3.5 na 6.35 toy ny smartphone, laptop, PC, PS4, Xbox One, AMP, gitara elektrika / piano / amponga, sns.
Lalao Fivoriana an-tserasera & fanofanana & fanohanana ara-teknika
Classes an-tserasera & stream mivantana ho an'ny olo-malaza & Studio
Salama, nividy Prood G ny headod oneodio aho ary tsy niasa ny mic. Notateriko ilay izy ary nahazo mpivady faharoa, saingy mbola manana olana mitovy aho. Miezaka ny hifandray amin'ny PS4 aho, fa lazainy amiko fa tsy misy mic mifandray.
Malahelo noho izany ny olanao. Tsy ny olana amin'ny loha-loha no olana. Izany dia momba ny fidirana amin'ny feo avo ny PS4 anao. Mila mandeha any amin'ny fanovana PS4 ianao, hisafidy ny fidirana feo ary misafidy ny headphone ao aminay.
Rehefa mampifandray ny mic4 amin'ny psXNUMX aho dia milaza amin'ny fifandraisana mikrofona amin'ny fomba ahoana no hametrahako izany
Azonao atao ny mampifandray azy amin'ny PS4 mba hilalao lalao. Raha misy olana hafa, dia afaka mandefa hafatra an-tserasera mivantana ao amin'ny Facebook isika
Inona ny fotoana fandefasana anao? Mipetraka any North Carolina aho
Mandritra ny fotoana sepcial, ny fotoana fandefasana dia ao anatin'ny iray volana.
Isaky ny mamerina ny mic aho amin'ny Xbox fikaon-doha dia manomboka mihetsika ny loha-hevitra ve misy fomba iray hampitahorana an'io?
modely vokatra inona no ampiasainao?
Nohanin'ny alikako ny findaiko tamin'ny findaiko manana pro g (maintso) azoko atao ny mamerina mandahatra ny tariby ihany
hi eny, azonao atao. Izahay dia hanangana an'ity asipa accessory ity.